राज कुमार अभिलाषी दहाल
इलाम फिक्कल बैशाख १९
सूर्योदय उधोग बाणिज्य सघँको प्रथम एतिहासिक आसन्न अधिबेशनमा दुई प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । गत चैत्र १६ गते एतिहासिक अधिबेशनको उदघाटन सम्पन्न भएपछि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्दै लामो समय नयाँ नेतृत्व चयन प्रकृया रोकिएको थियो ।
फिक्कल उद्योग बाणिज्य महासघँ र पशुपतिनगर उद्योग बाणिज्य महाँसघँको एकिकरण पछि हुनलागेको प्रथम अधिबेशन भएको कारणबाट पनि यस अधिबेशनलाई धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् । इलामकै ठुलो नगरपालिका सुर्योदयनगरपलिाकाको समग्र उद्योगिको साझा सस्थांको रुपमा रहने भएको कारणबाट अव कस्तो नेतृत्व आउलान भन्ने यहाँका धेरै उद्योगि ब्यवसायी वा सर्वसाधारण नगरबासीमा चासो रहेको छ । अहिले सघमा ६०१ जना सदस्य मतदाताको रुपमा रहेका छन् ।
सुर्योदयनगरपालिका ९ का उद्योगि उत्तम कुमार श्रेष्ठ तथा सुर्योदयनगरपालिका २ का उद्योगी प्रमोद राईले मगंलबार औपचारीक रुपमा अध्यक्षमा उम्मेद्धारी दिएका छन् । अहिले दुबै चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त रहेका छन् ।
को को छन् दुबै प्यानलमा
अध्यक्ष - उत्तम कुमार श्रेष्ठ
बरिष्ठ उपाध्यक्ष - दामोदर चापागाई
प्रथम उपाध्यक्षमा - जिआर (खडग बहादुर) खडका
दितिय उपाध्यक्षमा - मिलन राई
महासचिव - लक्ष्मि प्रसाद प्रसाई
सचिव - युवराज प्रधान
कोषाध्यक्ष - कृष्ण कुमारी खडका चादनी
खुल्ला सदस्य - युवराज ढुङगाना , मोहन दोर्जे कागाते , पवन गटटानी ,बिष्णु प्रसाद मैनाली
महिला सदस्य - दिपा पोख्रेल , साबित्रा मोत्तान उर्मिला , बालिका प्रधान , साबित्रा पोख्रेल
अध्यक्ष - प्रमोद राई
बरिष्ठ उपाध्यक्ष - गौतम प्रधान
प्रथम उपाध्यक्षमा - टिका राम अधिकारी
दितिय उपाध्यक्षमा - चन्दन मोहन अग्रवाल
महासचिव - राजन प्रधान
सचिव - कविता राई
कोषाध्यक्ष - लोक बहादुर प्रधान
सदस्य खुल्ला - सुरेन पौडेल ,सुजन तिमसिना , पुजन श्रेष्ठ , प्रज्वल प्रधान
महिला सदस्य - माईमति राई सबिना ,देउकुमारी कटटेल देवि , सन्तोकी तामाङ , सन्जिता तामाङ रहेका छन् । दुबै प्यानलले नगरका सबै क्षेत्रका उद्योगिहरुलाई समेटका छन् । आगामी २३ गते चुनाव हुदैछ मतदान फिक्कल बुथ र पशुपतिनगर बुथ गरी दुई स्थानमा हुदैछ ।
के छ त अध्यक्षका दुई प्रत्यासीको भिजन
राजकुमार अभिलाषी दहालले दुबै अध्यक्षका प्रत्यासी श्रेष्ठ र राईसगँ गरीएको कुराकानीको केहि अशं हामी राख्दैछौँ । कुराकानीको अडियो सामाग्री आज बुधबार बिहान ८ बजेको रेडियो फिक्कलको फिक्कल सेरोफेरोमा प्रसारण गरीसकेका छौँ ।
म लगायत मेरो टिमलाई मतदिएर बिजयी गराउनुस हामीलाई मत दिएकोमा तपाईलाई पछुतो नहुनेगरी काम गर्छौं – श्रेष्ठ
तपाईको उम्मेद्धारी किन ?
म लामो समय देखी तठस्थ अवस्थामा बसेर आफनो उद्योग ब्यवसाय सञ्चालन गरीरहेको छु । म जस्तै तथस्ट व्यत्तिनै उद्योग क्षेत्रमा चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो । मेरो लामो समय देखिको यस क्षेत्रमा भएको भुमिका लगायतले मलाई सबै सगँ मिलेर काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने महसु गरे र सबैले मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मैले उम्मेद्धारी दिएको हो । अर्को कुरा मेरो एकल चाहाना भदा पनि यो क्षेत्रमा तपाई जस्तो मान्छे नेतृत्वमा रहन आवश्यक छ भन्ने समग्र उद्योगिहरुको आग्रहमा मैले उम्मेद्धारी दिएको हुँ ।
उम्मेद्धारी दिदै गर्दा तपाईको भिजन एजेन्डा के छ त ?
यो सस्थाँ समग्र नेपाली उद्योगिहरुको साझा सस्थां हो । बिजय पश्चात म तिनै सबै उद्योगिहरु सगँको सहकार्यमा काम गर्छु मेरो टिममा अत्यन्तै दक्ष तथा काम गर्न सक्ने जुजारु व्यत्तिहरु ह्ुनुहुन्छ उहाँहरुको साथमा टिम वर्कका साथ मलाई काम गर्न कुनै अफ्ठयारो अवस्था छैन । अहिले व्यसायीलाई भईरहेको असहज परिस्थीत यसलाई कसरी सहजिकरण गर्न सकिन्छ राजनितिक हस्तक्षेप भन्दा पनि टाढा रहेर सुरक्षित लगानी मैत्रि बाताबरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा म काम गर्छु । अर्को समग्र नगरकै विकासमा हामी के गर्न सक्छौ भन्ने बारेमा गहनरुपमा काम गछौँ । ब्यपारीलाई चन्दा आतंकको कुरा छ पशुपति भन्सार कार्यलयमा रहेको असहजा हटाउदै सहजीकरण गर्नु पर्छ । निम्न आर्थिक अवस्थामा रहेका व्यत्तिहरुलाई साना साना कुरा ल्याउन असहज छ सो कुरालाई सहज बनाउनु छ । भन्सारमा कसरी सबैलाई सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले काम गर्नेछाँै । ब्यपारीलाई मात्र हैन समग्र नगरबासीको हितमा काम गर्नेछौँ । तपाईलाई जानकारी गराउँ हामी केहि प्रतिबद्धता पत्रहरु पनि तयार पार्ने क्रममा छौँ अपिल पनि आउछ त्यसमा तपाईले हाम्रो कुरा सबै पाउन सक्नुहुन्छ ।
यदि नगरपालिकाका उद्योगिहरुले तपाईलाई विश्वास गरेर मत दिए र जिताए भने तपाई के कस्ता काम गर्नु हुन्छ ?
अब हेर्नुस म नेता परिन मलाई त्यस्तो धेरै बोल्न आउदैन मलाई काम गर्न आउछ । अघि मैले भनिहाले धेरै कुरा म त्यलाई पुन दोहोराउन चाहान्न यहाँका होटल ब्यवसायहरुलाई कसरी ब्यवस्थीत गर्न सकिन्छ यहाँका फोहोरमैलाको ब्यवस्थापनमा कसरी गर्ने स्थानीय तहसगँको समन्वयमा नगरको विकासमै हामी भुमिका खेल्न सक्छौँ । समग्र उद्योगिहरुको लगानी सुरक्षित कसरी गर्न सकिन्छ उहाँहरुको मुहारमा कसरी खुसी ल्याउन सकिन्छ । यसलाई कसरी बिशुद्ध उद्योगि व्यपारीको सस्थां बनाउन सकिन्छ एक गैर राजनितिक सस्थाँको रुपमा सधै कायम राख्न म प्रयत्नशिल रहन्छु । म मात्रै हैन हामी पुरै टिम प्रयत्नशिल रहनेछौँ । यो जिल्लाकै ठुलो नगरपालिका यहाँ धेरै साना ठुला व्यापारीक केन्द्रहरु छन् । सबैलाइ मिलाएर लान जरुरी रहेको छ म सबै क्षेत्रका उद्योगिव्यसायीहरुलाई सघँमा एकताबद्ध गर्दै उहाँहरुको साना ठुला हरेक समस्या अफठ्यारा हरुलाई सम्बोधन गर्ने प््रायास गर्छु । जसकालागि नगरपालिका अरु सरोकारवालहरु सगँ पनि छलफल सहकार्य गरेर काम गर्नेछौ म एकलै हुदिन मसगँ हाम्रो सफल टिम छ हामी सगँ अनुभव छ । यसमा रहन मैले गरेका व्यसायीक सफलताले पनि धेरै भुमिका खेल्छ । हामी एक भिजनका साथ काम गर्ने छौँ । उद्योगी व्यसायीहरुको अवस्था सुधार्दै नगरकै मुहार फेर्ने तर्फ हामी लाग्नेछौँ ।
अहिले नगरको उद्योगको क्षेत्रमा के गर्नु पर्ने देख्नु हुन्छ ?
पहिलो कुरात यहाँ उद्योगिहरुको लागानी सुरक्षाको बाताबरण बनाउन आवाश्यक छ । चन्दाआतकं अरु बिभिन्न कुराको मारबाट उद्योगिलाई बचाउदै काम गर्नु पर्छ । यहाँ त उद्योगिको मात्र हैननी समग्र नगरकै विकासमा हामी भुमिका खेल्न सक्छौँ । अघि पनि भने जसको लागि नगरपालिका वा अर सबै तह क्षेत्र सगँहामी सहकार्य गर्नेछौँ ।समग्र उद्योगी व्यवसायीहरुको हितनै हाम्रो मुल मत्र हो । हामी सगँ धेरै कुराहरु छन् । जुन म यो छोटो समयमा गर्न सक्दीन ।
जित्नेमा कतिको आशाबादी हुनुहुन्छ ?
मत शत प्रतिशत आशाबादी छु । मेरो इमान्दारीता सबैलाई थहा छ । यसले गर्न सक्छ भन्ने बिश्वास छ । म मात्र हैन समग्र मेरो टिमले जित्छ हाम्रो टिममा खारिएका अनुभवी देखि जोस जागरले भरिएका जुजारु युवा व्यत्तिहरु हुनुहुन्छ त्यसैले हाम्रो पुरा टिमले जित्छ भन्नेमा म ढुक्क छु । हिजो पनि म सामासेवामा सकृय थिए आज पनि छु । त्यसैले सबैलाई बिश्वास छ मैले जितेभने म कुनै आर्थिक प्रलोभनमा नपरी नगरका उद्योगि व्यवसायीहरुको हितमा काम गर्ने छु । मेरो सबै टिमले गर्छ । त्यसैले भारी मतका साथ म तथा मेरो टिमले जित्छ ।
तपाईको प्रतिस्पर्र्धी प्रमोद राईको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
हेनर्सु उहाँका व्यत्तिगत बारेमा मलाई भन्नु केहि छैन उहाँ राम्रो व्यत्ति हुनुहुन्छ तर हामी यस सस्थालाई बिसुद्ध ब्यसायीहरुको साझा सस्थां भनेर भनिरहेका छौँ उहाँ त एक राजनितिक रुपमा पनि गाउँतहको नेतृत्वमा हुनुहन्छ चुनावमा पनि लडनु भयो । अरु टिपणी गर्नु छैन म आफु अरु कत्तै नहेरी व्यसायमा तथा समाजमा सानाठुला सेवामा लागेको मान्छे अरुको बारेमा मलाई खासै भन्न केहि छैन । सबै मिलेर अगि बढौँ हामी मिलेमात्र हाम्रो सस्थां फस्टाउछ ।
अन्यमा समग्र उद्योगिहरुलाई आफना मतदाताहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
म त लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीकै रुपमा कृयाशिल छ । म यहि क्षेत्रमा रहेर समाज सेवालगायतमा पनि आबद्ध छु । सधै यस क्षेत्रको उद्योगि व्यवसायी हरु सगँ सम्पर्कमा छु । हामी स्थानीय सरकार सगँको समेत सहकार्यमा उद्योगिको हितमा काम गर्ने साना ठुला सबै उद्योगी व्यपारीहरु बिच भेदभाव नराखी हामी काम गछौँ यहाँका व्यपारीहरुको बजार भारतीय बजार सगँ छ यसबारेपनि हामी समन्वयकारी भुमिका खेल्नेछौँ उद्योगिमात्र नभएर यहाँका चिया अरु कृषि क्षेत्रलगायतका सबै क्षेत्रमा हामी काम गर्ने छौँ मेरो टिममा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ बरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोद चापागाई ,प्रथम उपाध्यक्षमा जिआर (खडग बहादुर) दितिय उपाध्यक्षमा मिलन राई महासचिव लक्ष्मि प्र प्रसाई , सचिव युवराज प्रधान , कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमारी खडका चादनी हुनुहुन्छ खुल्ला सदस्य युवराज ढुङगाना , मोहन दोर्जे कागाते , पवन गटटानी , बिष्णु प्र मैनाली र महिला सदस्यमा दिपा पोख्रेल , साबित्रा मोत्तान , बालिका प्रधान , साबित्रा पोख्रेल हुनुहुन्छ सबै सक्षम हुनुहुन्छ अनुभवले पनि खारीएका हुनुन्छ हामी उद्योगि व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका छौँ । त्यसैले हाम्रो टिमलाई मत दिएर प्यानलनै बिजय गराउनुहुन म तपाईको लोकप्रिय मिडिया रेडियो फिक्कल मार्फत सबैमा धन्यवाद दिन चाहान्छौँ ।
हस समय दिनुभयो तपाईलाई धन्यवाद बिजयको लागि अग्रिम शुभकामना व्यत्त गछौँ
हस राजकुमार जी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समयको लागि हिजो मनोनयन गरे त्ययपछि सबैभन्दा पहिला एकाबिहानै तपाईले मलाई रेडियो फिक्कलमा आफनो कुरा राख्ने मौका दिनु भयो तपाईलाई धन्यवाद म कुनै नेता हैन त्यसैले घुमाएर ठुलोकुरा गर्न आउदैन सिधाकुरा गरे घुमाएर मिठोपारेर कुरा गर्न सकिन होला केकस्तो बोले स्पस्ट भएन होला यदि त्यो भएमा म अझै सबै सगँ छलफल गर्ने छु काम गर्ने छु । आफु त यसै पनि समाज सेवी उसै पनि समाजसेवी जहिले समाजसेवामा सकृय रहन्छु । फेरी पनि बिजय पछि पनि यहाँबाट कमाउला भन्ने पटक्कै छैन मलाई यतिमै ठिक छ अरु दायाबाया गरौला भन्ने पनि छैन बरु केहि दिउ गरौँ भन्ने छ ।म पादर्शिरुमा काम गर्ने छु मेरो टिममा सबै क्षेत्रका हुनुहुन्छ मैलेमात्र एकलै गर्ने हैन त्यसैले पशुपतिमा परे त्यहिका पदाधिकारी तपाईमाझ हुनुहुन्छ अरु ठाउ केहि परे तपाईकै क्षेत्रका रहनुहुने छ म जहिले तपाईकै साथमा हुने छु मत दिएर जिताउनुस तपाईलाई पछुतो हुने बताबरण दिनेछैनौ हामी सबैले । धनयवाद ।
सुर्योदय उद्योगबाणिज्य सघँलाई एक ट्राकमा ल्याउन काम गर्छु – राई
तपाई त तदर्थ समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सहमतिको प्रयासपनि भएको सुनेको थियौ अहिले तदर्थ समितिको तपाईले नेतृत्व गर्दै गर्दा एक नेतृत्वकर्ताको हिसावबाट भनिदिनुस न किन सहमतिको साथ नेतृत्व चयन हुन सकेन ?
साबिक फिक्कल र पशुपतिनगर उद्योगबाणिज्य सघँ एकिकरण भएपछि चैत्र २ गते पुर्णता पायो सबै क्षेत्रका उद्यागिहरु सबै मा यसको नेतृत्व गर्ने उर्जा जाग्यो यहि कुरा मध्यनजर गर्दै सहमतिको प्रयासका बाब्जुत पनि अन्त्यमा हामी चुनावमा आयौँ । यो धुर्विकरण नभएर सबैमा जागेको एक उर्जा हो । सबै उद्योगी बिचको उर्जाको रुपमा हामी लिन सक्छौँ । दुई प्यानल भएर चुनावमा लडनुलाई हामी सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । अब प्रजातान्त्रीक अभ्यासबाट जसले जित्छ उ सबैको नेता बन्छ ।
तपाई के कस्ता भिजन एजेडाका साथ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ?
ब्यवसायीहरुको हक हित सबै उद्योगिहरुको लगानीको सुरक्षा नै हो हाम्रो मुख्य भिजन त । अब हिजो अलग अलग अवस्थामा रहेको उद्योगिहरुको सस्थां आज एक भएको छ एक भएको ४७ दिन मात्रै हुदैछ आज अब यो सुर्योदयनगर उद्योग बाणिज्य सघँ भरखर जन्म मात्रै भएको छ । पुराना ८ गाविस मिलेर बनेको यस उद्योग बाणिज्य सघँ १४ वडाका व्यपारीहरु उद्योगिहरुलाई एक ठाउमा उभ्याएर सबैको साझा छाता सगँठन बनाउदै महासघँमा आबद्ध गराउन नगरका सबै ब्यपारीक क्षेत्रहरुको बिकास गर्न यहाँका उद्योगिहरुको विकास यहाँका उत्पादीत बस्तुहरुको सुरक्षित ब्यवसायको लागि पहल गर्ने पशुपतिनगर नाकाको सुरक्षित ब्यवस्थापन गर्न लगयात धेरै कुरा छन् । जुन म तथा मेरो टिमले गर्न सक्छाँै भन्ने सोचका साथ नै हामी चुनाबी मैदानमा छौँ ।
नगरका हाल रहेका ६०१ उद्योगिहरु मध्ये बहुमतले तपाईलाई मत दिएर जिताए भने के छ तपाईले सोचेको मुख्य काम ?
अब मैले अघि पनि भने नगर हाम्रो ठुलो छ । केवल फिक्कल पशुपतिनगरमात्रै छैन साना साना बजारहरु छन् । नगरका अरु पर्यटकीय क्षेत्रहरु छन् । सबै क्षेत्रका उद्योगिहरुलाई यस सघँमा आबद्ध गराउदै सबैको हक हितको लागि लडने साझा मञ्चको रुपमा विकास गराउने प्रयत्न गर्छाैँ । ै यहाँका लगानी मैत्रि तथा लगानी सुरक्षाको बताबरण बनाउदै जान जरुरी छ । नगरमा भखरै जन्मेको उद्योग बाणिज्य सघँ मा गर्नु पर्ने काम धेरै छ सेन्टर कार्यलयको लागि १ रोपनि जग्गा उपलब्ध भईसकेकै छ । यहाँका चियाको बिषयमा समसया छ एग्रो एग्रिकल्चर को विकास गर्नुछ । इलामको पहिचान अ को कुरा छ । अर्को राम्रो कुरा नगर भारतिय सिमाना सगँ जोडिएको छ यस भारतीय नाका को नगरका व्यवसायीले सहि रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने बाताबरण बनाउन जरुरी छ । आफनै नाका बाट आयत निर्यात गर्ने वतावरण बनाउन जरुरी छ । हामी सुर्योदयनगरपालिकाको सहकार्यमा पनि काम गछौँ दुबै लागेर नगरको विकास गर्ने क्रममा जानेछौँ
अब सबैभन्दा पहिला त मैले धेरै उद्योगि व्यवसायीहरुको आग्रहमा उम्मेद्धारी दिएको हुँ । मैले पशुपतिनगर उद्योग बाणिज्य सघँको अध्यक्षको हिसावबाट पनि तपाई सगँ कुरा गरेको छु । बिगतमा तपाईलाई थाहाँ छ अधिबेशनमा पनि तपाई रिपोटिङ्गमा आउनुभएको थियो । मैले पहिलो कार्यकाल सफलता पुर्वक चलाएकोले नै मलाई दोस्रो कार्यकालको लागि साथीहरुले जिताउनु भयो । त्यसैले म मा अनुभव छ म गर्न सक्छु व्यवसायीको मागहरु म पुरा गर्न सक्छु भनेर नै मैले उम्मेद्धारी दिएको हो । ८ बर्ष सम्म सफलता पुर्वक उद्योग बाणिज्य सघँ चलाएको छु । अहिले तदर्थ समितिको पनि सयोंजक छु । धेरै छन मेरो उम्मेद्धारीका कारणहरु ।
हिजो मैले गरेको काम अनुभवकै कारण नै मलाई सबैले उम्मेद्धार बन्न आग्रह गर्नु भयो त्यसैले मेरो जित हुन्छ भन्नेमा म आशाबादी छु मेरो टिममा सबै अनुभवी हुनुहुन्छ त्ससैले हाम्रो टिमले नै जित्छ । हामी ढुक्क छौँ ।
तपाईको प्रतिस्पर्थी उत्तम कुमार श्रेष्ठको बारेमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
हैन उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ । उहाँ पनि उद्योगि समाजसेवामा सकृय हुनुहुन्छ । अरु के भन्ने र ?
मगंलबार मात्रै नोमिनेशन गर्नु भएको छ अन्तयमा समग्र उद्योगिहरु मतदादाताहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
हेर्नुस राजकुमार जी हामी सुर्योदय उद्योग बाणिज्य सघँलाई सबै उद्योगि व्यवसायीहरुको साझा सस्थाँको रुपमा विकास गराउन चाहान्छौँ । म सगँ अनुभव छ मेरो कामको मुल्याङन गरेर यो भरखर मौलाउदै गरेको सुर्योदय उद्योगबाणिज्य सघँलाई हुर्काउने ट्राकमा ल्याउने तथा व्यवसायीहरुको हक हितमा लाग्ने मौका दिनुहोस भन्ने आग्रम गर्दै तपाईको लोकप्रिय रेडियो फिक्कल मार्फत सबैमा मलाई मत दिएर जिताउन आग्रह गर्दछु ।
मैले गरेको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै नोमिनेशन पछि एकाबिहानैको यो समयमा रेडियो फिक्कल मार्फत आफना केहि भनाईहरु राखीदिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धनयवाद । बिजयको लागि अग्रिम शुभकामना पनि ।
राज कुमार जी तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरा भनाई राख्ने मौका दिनुभयो । हाम्रा प्रतिबद्धता तथा एजेन्डाहरु पनि हामी सार्वजानिक गर्नेछौँ । तदर्थ समितिको सयोंजको हिसावले सबैमा मतदान प्रकृयामा सहभागि हुन र यस एतिहासिक प्रथम अधिबेशनलाई सफल बनाउन पनि म आग्रह गर्दछु । अन्यमा सबै उद्योगिहरुको हक हितमा सकृय रहने चाहानाका साथ चुनावी मैदानमा प्रजातान्त्रीक अभ्यास गर्न आएका म तथा मेरो टिमलाई मतदान गरेर बिजय गराउन हार्दिक अपिल गर्दछु । धन्यवाद ।
पढिदिनुभयो धन्यवाद केहि सहल्ला सुझाव भए पाउ है अनय पदाधिकारी सगँ पनि हाम्रो तरङमा प्रसारण गर्ने छौ रेडियो फिक्कल ९०.६ Mhz And www.radiofikkal.org.np